» यसरी कम गर्न सकिन्छ थकाइ
यसरी कम गर्न सकिन्छ थकाइ
२०७६ जेष्ठ २,बिहीबार १९:४२
फोटो : स्वास्थ्य खबर
ना शरीरका लागि ईन्धन हो। जस्तो गाडीको इन्जिनमा शुद्ध तेल प¥यो भने सहज ढंगले कुद्छ। त्यसैगरी मानव इन्जिनमा पनि ईन्धन सफा पर्नुपर्छ। विशेष गरी काम गरेर थाकेको र भोकाएको अवस्थामा खानेकुरा खाँदा होस पुर्याउनुपर्छ। दिउसोको खाजामा एकदमैं धेरै तरल पदार्थ पाइने खाजा खाँदा थकाइ कम हुन सक्छ। मासुजन्य र कार्बोहाइडेड अधिक भएको खाजाले भोक त मेट्छ तर थकाइ बढाउन सक्छ। स्वास्थ्य खबर डटकम ले लेखेको छ ।
थुकका यति धेरै फाइदा, कसरी उत्पादन हुन्छ?
फोहोर फाल्न कता लाग्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुस्, कारबाहीमा परिएला
भ्यागुताको कथा सुनाउने ओलीलाई बाबुरामले पनि सम्झाए ‘निदुली बाहुन’को कथा!
प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव: भारतको तीव्र दबाबपछि विषादी जाँच नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय